Paul's Letter to the Ephesians – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / စီရင်သောဩဝါဒစာ / Paul's Letter to the Ephesians
1:1 ရှင်ပေါလု, an Apostle of Jesus Christ through the will of God, to all the saints who are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus.
1:3 မင်္ဂလာငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည်ဖြစ်, အဘယ်သူသည်မိုဃ်းကောင်းကင်၌ခပ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာနှင့်အမင်္ဂလာခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကို, ခရစ်တော်အားဖြင့်,
1:4 သူသည်ကမ္ဘာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ရှေ့မှာထိုသူကိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရှေးခယျြခဲ့သကဲ့သို့, ကျနော်တို့ရှေ့တော်၌သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအတွက်.
1:5 သူကသားကဲ့သို့မွေးစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုထိုသို့ခွဲခန့်မှတ်သားထားပါတယ်, ယေရှုခရစ်အားဖြင့်, ကိုယ်၌, အလိုတော်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်နှင့်အညီ,
1:6 ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၏ဘုန်းအသရေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းအဘို့အ, သူသည်မိမိခစျြသားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့သည်ဟူသောနှင့်အတူ.
1:7 သူ့ကိုအတွက်, ကျနော်တို့ကသူ့အသွေးအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ပြီ: ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၏စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အညီဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုများ၏လွှတ်,
1:8 ကိုကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်အရာဖြစ်ပါသည်, အားလုံးပညာနှင့်သမ္မာသတိနှင့်အတူ.
1:9 ဒါကြောင့်သူကသူ့အလိုတော်၏နက်နဲသောအရာကိုငါတို့အားအထင်ရှားစေပါဘူး, ပေးသောသူသည်ခရစ်တော်အားထွက်ထား, သူ့ကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ထုံးစံ၌,
1:10 အချိန်ပြည့်ဝသူတို့အားဘော်ပြသောနက်ထဲမှာ, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသူ့ကိုမှတဆင့်ရှိကွောငျးခရစ်တော်သည်အရာရာ၌သက်တမ်းတိုးဖို့မှသကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာ.
1:11 သူ့ကိုအတွက်, ကြှနျုပျတို့လညျးကြှနျုပျတို့အဘို့ကိုခေါ်နေကြတယ်, အလိုတော်၏အကြံပေးခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစုံသူကို One ၏အစီအစဉ်ကိုနဲ့အညီခွဲခန့်မှတ်သားထားသည်ပြီးမှ.
1:12 ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်, ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်း, ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်အတွက်ကြိုတင်မျှော်လင့်ကြောင်းကြသူ.
1:13 သူ့ကိုအတွက်, သင်လည်းပဲ, သငျသညျအမှနျတရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားယုံကြည်သည်ပြီးနောက်, ကယျတငျတျောမူခွငျး၏ဧဝံဂေလိတရားကိုရာဖြစ်ပါသည်, ထိုကတိတော်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်.
1:14 သူကငါတို့အမွေ၏ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုဖြစ်ပါတယ်, ရွေးနှုတ်ခြင်း၏ဝယ်ယူမှုဆီသို့, ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်း.
1:15 ဒီအတွက်ကြောင့်, and hearing of your faith that is in the Lord Jesus, and of your love toward all the saints,
2:2 သငျသညျအတိတ်ကာလ၌လမ်းလျှောက်ရသော, ဤလောကကိုအစိုးရသောအသက်အရွယ်အရသိရသည်, ဒီမိုဃ်းကောင်းကင်၏တန်ခိုးကိုအစိုးရသောမင်းသည်နှင့်အညီ, ယခုမယုံကြည်မှု၏သားအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်သူကိုဝိညာဉ်တော်သည်.
2:3 ငါတို့သည်လည်းဤအရာများကိုအားလုံးကိုစကားပြောဆိုမှုခဲ့ကြသည်, အတိတ်ကာလ၌, ကိုယ်ကာယ၏တပ်မက်ခြင်းအားဖြင့်, ဇာတိပကတိ၏အလိုတော်အတိုင်းသရုပ်ဆောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတှေးအညီ. ဒီတော့ကျနော်တို့ခဲ့ကြသည်, သဘာဝအားဖြင့်, အမျက်ထွက်ခြင်း၏သား, ပင်ကိုအခြားသူများနဲ့တူ.
2:4 သို့သျောလညျးနေဆဲ, ဘုရားသခ, သူကိုမသနားတျောမူကြွယ်ဝဖြစ်ပါသည်, သူကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအလွန်မေတ္တာကို ထောက်.,
2:5 ငါတို့သည်ငါတို့၏အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောအချိန်မှာတောင်, ခရစ်တော်အားအတူတကွကျွန်တော်တို့ကို enlivened ထားပါတယ်, အဘယ်သူ၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုသိမ်းပြီးပါပြီ.
2:6 ထိုမင်းသည်အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ထွန်းစေခဲ့ပါသည်, သူကျွန်တော်တို့ကိုကောငျးကငျဘုံ၌ရှိအတူတကွထိုင်စေလိုက်ပါတယ်, ယေရှုခရစ်၌,
2:7 သူကပြသအံ့သောငှါဒါ, ခေတ်ကာလအတွက်မကြာမီရောက်လာရန်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်များ၏ပေါများချမ်းသာကြွယ်, ယေရှုခရစ်၌ကြှနျုပျတို့အပျေါကသူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းအားဖြင့်.
2:8 ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အဘို့, သငျသညျယုံကွညျခွငျးအားဖွငျ့ကယျတငျခွငျးသို့ရောပြီ. ဤရွေ့ကား, သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မ, ဘုရားသခငျ၏လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်၏.
2:9 နှင့်ဤအမှုအရာမဟုတ်, အဘယ်သူမျှမကမေလဘုန်းအသရေဒါ.
2:10 ငါတို့သည်သည်သူ၏လက်ရာများမှာ, ဘုရားသခငျသညျပွငျဆငျသောကောင်းသောအကျင့်ဘို့ယေရှုခရစ်၌ created နှင့်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သင့်ပါတယ်ရသော.
2:11 ဒီအတွက်ကြောင့်, be mindful that, အတိတ်ကာလ၌, you were Gentiles in the flesh, and that you were called uncircumcised by those who are called circumcised in the flesh, something done by man,
2:12 သငျတို့သခဲ့, အဲ့အချိန်မှာ, ခရစ်တော်သည်အမပါဘဲ, ဣသရေလအမျိုး၏အသက်လမ်းမှနိုင်ငံခြားဖြစ်ခြင်း, ပဋိညာဉ်မှဧည့်သည်များဖြစ်ခြင်း, ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောအဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်း, နှင့်ဤကမ္ဘာကြီး၌ဘုရားသခင်မပါဘဲဖြစ်ခြင်း.
2:13 ယခုမူကား, ယေရှုခရစ်၌, သငျသညျ, အတိတ်ဝေးစွာကာလ၌အဘယ်သူသည်ခဲ့ကြသည်, ခရစ်တော်၏အသွေးအားဖြင့်အနီးသို့ရောက်ကြပြီ.
2:14 သူငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာသည်. သူတဦးတည်းထဲသို့နှစ်ခုလုပ်, ခြားနားခြင်းအလယ်အလတ်မြို့ရိုးကိုဖျက်သိမ်းသဖြင့်, အတိုက်အခံများ၏, မိမိဇာတိပကတိ၌နေဖြင့်,
2:15 အမိန့်တော်အားဖြင့်ပညတ်တရား emptying, သူကဤနှစ်ခုကို join အံ့သောငှါဒါ, ကိုယ်၌, တဦးတည်းလူသစ်သို့, ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်
2:16 နှငျ့ဘုရားသခငျမှနှစ်ဦးစလုံးပွနျလညျသငျ့မွ, တကိုယ်တည်းအတွက်, လက်ဝါးကပ်တိုင်မှတဆင့်, မိမိကိုမိမိ၌ဤအတိုက်အခံဖျက်ဆီး.
2:17 ထိုအပျေါမှာရောက်ရှိလာ, သူဝေးခဲ့ကြသူအသငျသညျငွိမျ evangelized, နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအနီးတွင်ဖြစ်နှင့်သောသူတို့မှ.
2:18 သူ့ကိုက, ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်, တဝိညာဉ်တော်၌, ခမည်းတော်ထံသို့.
2:19 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, သင်တို့သည်နောက်တဖန်ဧည့်သည်များနှင့်အသစ်ဝင်ရောက်မှုများမှာ. အဲဒီအစား, သငျသညျဘုရားသခငျ၏အိမ်သူအိမ်သားအတွက်သန့်ရှင်းသူအတို့တွင်အနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်,
2:20 တမန်တော်များ၏အခြေခံအုတ်မြစ်အပေါ်သို့နှင့်အနာဂတ္တိကျမ်း၏တညျဆောကျခံ, ကိုဉီးအုတ်မြစ်အဖြစ်ယေရှုခရစ်သည်ကိုယ်တော်တိုင်နှင့်အတူ.
2:21 သူ့ကိုအတွက်, built သိရသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်စည်းဝေးကြရှုမြင်သုံးသပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်, သခင်ဘုရား၌အဘို့သန့်ရှင်းသောဗိမာန်တော်သို့တက်မြင့်တက်လာ.
2:22 သူ့ကိုအတွက်, သင်သည်လည်းထိုဝိညာဉ်တော်၌ဘုရားသခင်၏နေရာကိုသို့အတူတကွတည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီ.
3:1 ဒီကျေးဇူးတရား၏အကြောင်းပြချက်အားဖြင့်, ငါ, ရှင်ပေါလု, amaprisoner of Jesus Christ, for the sake of you Gentiles.
3:2 အခုတော့ဆက်ဆက်, သငျသညျဘုရားသခငျ၏ကျေးဇူးတရား၏စပ်ဆိုင်သောသာသနာ၏ကြားရကြပြီ, သငျတို့တှငျအကြှနျုပျအားပေးခဲ့သည့်:
3:3 ကြောင်း, ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်, ထိုနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေငါ့အားထင်ရှားခဲ့သည်, ငါစကားအနည်းငယ်အတွက်အထက်ရေးထားပြီနည်းတူ.
3:4 သို့သျောလညျး, အနီးကပ်ဒီစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်, you might be able to understand my prudence in the mystery of Christ.
3:5 အခြားအသားစဉ်မြေးဆက်အတွက်, ဒီလူသားတို့မသိခဲ့, ယခုသောဝိညာဉ်တော်၌မိမိသည်သန့်ရှင်းသောတမန်တော်တို့နှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းမှထင်ရှားလျက်ရှိသည်ပင်အဖြစ်,
3:6 တပါးအမျိုးသားတို့သည် Co-အမွေခံဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, နှင့်အတူတူပင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏, နှင့်မိတ်ဖက်အတူတူ, ယေရှုခရစ်၌ဂတိတော်အားဖြင့်, ဧဝံဂေလိတရားကိုတဆင့်.
3:13 ဒီအတွက်ကြောင့်, I ask you not to be weakened by my tribulations on your behalf; for this is your glory.
3:14 ဒီကျေးဇူးတရား၏အကြောင်းပြချက်အားဖြင့်, ငါငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ထံသို့ကြှနျုပျဒူးကွေး,
3:16 ငါသည်သူ၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သီလအားဖြင့်ခိုင်ခံ့စေခြင်းငှါသင်တို့အားပေးသနားတော်မူဖို့သူ့ကိုမေးမြန်း, သူ၏ဘုန်း၏စည်းစိမ်နှင့်အညီ, အတွင်းလူ,
3:17 ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အတွက်အမြစ်တွယ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌အသက်ရှင်မည်အကြောင်း, နှင့်အပေါ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, မေတ္တာ.
3:18 ဒါကြောင့်သင်လက်ခံနိုင်မည်အကြောင်း, သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူ, width နဲ့အရှည်နှင့်အမြင့်နှင့်အတိမ်အနက်ကိုအဘယ်သို့သောအ
3:19 ခရစ်တော်၏မေတ္တာ, နှင့်ပင်အားလုံးအသိပညာထက်သောအရာကိုသိနိုင်မည်, သငျသညျဘုရားသခငျ၏လူအပေါင်းတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငှါဒါ.
3:20 ယခုခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြုပါရန်တတ်နိုင်သူ့ကိုသူ, သာ. ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်မေးမြန်းသို့မဟုတ်နားလည်နိုင်ထက်, ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်မှာသောသီလအားဖွငျ့:
3:21 သူ့ကိုမှဘုန်းအသရေဖြစ်, အသင်းတော်၌၎င်း, ယေရှုခရစ်၌, တိုင်းမျိုးဆက်တစ်လျှောက်လုံး, ထာဝရအမြဲတမ်း. အာမင်.
4:1 ဆိုတော့, သခင်ဘုရား၌တစ်အကျဉ်းသားအဖြစ်, ငါသည်သင်တို့ကိုသင်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးသောဖို့မှေးလုပျငနျးကိုခံထိုက်သောသူတစ်ဦးထုံးစံ၌လမ်းလျှောက်ဖို့တောင်းပန်ပါ၏:
4:2 အားလုံးနှိမျ့ခခြွငျးနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူ, သည်းခံခြင်းနှင့်အတူ, မေတ္တာအချင်းချင်းထောက်ခံ.
4:3 ငြိမ်သက်ခြင်း၏အနှောင်အဖွဲ့အတွင်းဝိညာဉ်တော်၏စည်းလုံးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်စိုးရိမ် Be.
4:4 တကိုယ်တည်းနှင့်စိတ်တဝိညာဉ်တည်း: ဤသင်သည်သင်၏နှင့်စပ်ဆိုင်သောခေါ်တမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ပြီ:
4:5 တဦးတည်းသခင်, တဦးတည်းယုံကြည်ခြင်းအား, တဦးတည်းဗတ္တိဇံ,
4:6 လူအပေါင်းတို့၏တဦးတည်းအဘတည်းဟူသောဘုရားသခင်သည်, ကျော်အားလုံးအဘယ်သူသည်, အပေါင်းတို့နှင့်တဆင့်, ငါတို့ကိုအားလုံးအတွက်.
4:8 ဒီအတွက်ကြောင့်, သူကပြောပါတယ်: "မြင့်မြင့်ပေါ်တက်, သူသည်သိမ်းသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောကိုယ်တိုင်ကယူ; သူယောက်ျားအားလက်ဆောင်ပေး၏။ "
4:9 ယခုသူမတက်ပြီပြီ, အဘယျသို့သူ့ကိုလည်းဆင်းသက်တော်မူရန်အဘို့အ မှလွဲ. ကျန်ကြွင်းသော, မြေကြီးတပြင်အောက်အရပ်မှပထမဦးဆုံး?
4:10 သူဆင်း သက်. လည်းခပ်သိမ်းသောကောင်းကင်အထက်တက်ကြွသူအတူတစျခုဖွစျသညျ, သူအရာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းစေခြင်းငှါဒါ.
4:11 ထိုတစျခြို့သောတမန်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခွင့်ပြုခဲ့, နှင့်အချို့သောအနာဂတ္တိကျမ်း, သေးအမှန်တကယ်အခြားသူများကိုသာသနာပြုအရာ၌, နှင့်အခြားသူများဓမ္မဆရာများနှင့်ဆရာ,
4:12 သန့်ရှင်းသူတို့၏ပြည့်စုံ၏မျက်နှာကို ထောက်., အဓမ်မအမှုအလုပျခွငျးအားဖွငျ့, ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တည်ဆောက်ခြင်းအလိုငှါအတွက်,
4:13 ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်း၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက်နှငျ့ဘုရားသခငျ၏သားတျော၏ပညာအတတ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်သည်အထိ, စုံလင်သောသူကဲ့သို့, ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်း၏အသက်အရွယ်အကျင့်ပမာဏကိုအတွက်.
4:14 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထို့နောက်မရှိတော့သူငယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, နှောင့်အယှက်များနှင့်အယူဝါဒအမျိုးမျိုးရှိသမျှလေဖြင့်ဆောင်သွား, ယောက်ျား၏အပြစ်အားဖြင့်, နှင့်အမှားဆီသို့လှည့်ဖြားသောပရိယာယ်အားဖြင့်အားဖြင့်.
4:15 အဲဒီအစား, မေတ္တာအတွက်သမ္မာတရားနှင့်ညီသရုပ်ဆောင်, ကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးတိုးပွါးသင့်တယ်, ကိုယ်တော်၌ဦးခေါင်းသောသူသည်, မိမိကိုမိမိခရစ်တော်သည်.
4:16 ထိုသူ၌အဘို့, တကိုယ်လုံးနီးကပ်စွာအတူတကွမှီဝဲသော, တိုင်းအခြေခံအားဖြင့်ပူးတွဲ, အသီးအသီးအစိတ်အပိုင်းရိတ်က္ခာကို function ကိုတဆင့်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှတိုးတက်မှုဆောင်ခဲ့, မေတ္တာအတွက်၎င်း၏တည်ဆောက်ခြင်းအလိုငှါဆီသို့.
4:17 ဆိုတော့, I say this, and I testify in the Lord: that from now on you should walk, not as the Gentiles also walk, in the vanity of their mind,
4:21 မုချမျာ​​းအတွက်, you have listened to him, and you have been instructed in him, according to the truth that is in Jesus:
4:24 and so put on the new man, အဘယ်သူသည်, in accord with God, is created in justice and in the holiness of truth.
4:25 ဒီအတွက်ကြောင့်, setting aside lying, speak the truth, မိမိအိမ်နီးချင်းနှင့်အတူအသီးအသီး. For we are all part of one another.
4:30 တဖန်ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်စိတ်မနာစေဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ပါဘူး, အဘယ်သူကို၌သင်တို့ကိုတံဆိပ်ခတ်ခဲ့ကြ, ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်ဆီသို့.
4:31 အားလုံးခါးသီးမှုနှင့်အမျက်ဒေါသနှင့်အဒေါသအမျက်စေ့နှင့်အော်ဟစ်ခြင်းနှင့်ဘုရားကိုလွန်ကျူးကွာသင့်ထံမှယူပါစေ, အားလုံးငြိုးနှင့်အတူ.
4:32 ထိုအခငျြးခငျြးမှသနားကြင်နာဖြစ်, ခွင့်လွှတ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်, ဘုရားသခငျသညျခရစျတျောအတွက်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပြီနည်းတူ.
5:1 ထို့ကြောင့်, အများဆုံးချစ်သားကဲ့သို့, ဘုရားသခငျ၏တုပဖြစ်.
5:2 နှင့်ချစ်ခြင်း၌ကျင်လည်, ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်ကိုကိုယ်တော်တိုင်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏နည်းတူ, ဘုရားသခင်အားပူဇော်သက္ကာနှင့်ယဇ်အဖြစ်, ချိုတဲ့အမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့.
5:4 nor any indecent, or foolish, or abusive talk, for this is without purpose; ဒါပေမဲ့မယ့်အစား, give thanks.
5:7 ထို့ကြောင့်, do not choose to become participants with them.
5:8 For you were darkness, အတိတ်ကာလ၌, but now you are light, သခင်ဘုရား၌. သို့ဖြစ်., walk as sons of the light.
5:11 ဆိုတော့, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, ဒါပေမဲ့မယ့်အစား, refute them.
5:14 ဒီအတွက်ကြောင့်, ကဆိုပါတယ်: “You who are sleeping: awaken, and rise up from the dead, and so shall the Christ enlighten you.”
5:15 ဆိုတော့, ကိုညီအစျ, see to it that you walk cautiously, not like the foolish,
5:17 ဒီအတွက်ကြောင့်, do not choose to be imprudent. အဲဒီအစား, understand what is the will of God.
5:18 And do not choose to be inebriated by wine, for this is self-indulgence. အဲဒီအစား, be filled with the Holy Spirit,
5:22 မယားတို့ကိုသူတို့၏ခင်ပွန်း၏လကျအောကျခံဖြစ်သင့်, ထာဝရဘုရားအားအဖြစ်.
5:23 ခင်ပွန်းဘို့မယား၏ခေါင်းသည်, ခရစ်တော်အသင်းတော်၏ခေါင်းသည်နည်းတူ. သူကသူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်.
5:24 ထို့ကြောင့်, အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးရုံအဖြစ်, ထိုနည်းတူမယားတို့ကိုခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကာလ၌မိမိတို့ခင်ပွန်း၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သင့်.
5:25 အချင်းယောက်ျား, သင့်ရဲ့ခင်ပွန်းကိုချစ်, ခရစ်တော်ကိုလည်းဘုရားကျောင်းကိုချစ်ပြီးသူ့အဘို့မိမိကိုယျကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်မယ့်အဖြစ်,
5:26 သူမသန့်ရှင်းစေခြင်းအလိုငှါဒါ, ရေနှင့်အသက်တာ၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူမ၏သန့်ရှင်းသောဆေး,
5:27 သူတစ်ဦးဘုနျးကွီးသောဘုရားကျောင်းကဲ့သို့မိမိကိုမိမိမှသူမ၏ဆက်ကပ်အံ့သောငှါဒါ, မည်သည့်အစက်အပြောက်သို့မဟုတ်ရှုံ့သို့မဟုတ်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအရာရှိခြင်းမဟုတ်, သူမသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
5:28 ဒါကြောင့်, လွန်း, ယောက်ျားတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုသကဲ့သို့မိမိခင်ပွန်းတို့ကိုချစ်သင့်တယ်. သူ့ဇနီးသညျမိမိကိုချစ်သောသူချစ်သောသူသူ.
5:29 အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်မိမိအသားကိုမုန်း၏ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အစားသူကအာဟာရနှင့်မွတျနိုး, ခရစ်တော်ကိုလည်းဘုရားကျောင်းမှမအဖြစ်.
5:30 ငါတို့သည်သူ့ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း, သူ့အသားနှင့်သူ၏အရိုး၏.
5:31 "ဒီအတွက်ကြောင့်, တစ်ဦးသောသူသည်မိမိဖခင်နှင့်မိခင်နောက်ကွယ်မှချန်ခြွင်းရမည်, သူသည်မိမိမယားကိုမှီဝဲရကြလိမ့်မည်; ထိုသူနှစ်ယောက်သားတကိုယ်တည်းကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ "
5:32 ဤအရာသည်အလွန်ခံယူသည်. ထိုအခါငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်အတွက်စကားပြောပါ၏.
5:33 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, အသီးအသီးအသီးအသငျသညျတစျဦးသညျမိမိအဖြစ်သူ၏ဇနီးချစ်ရမည်. ထိုအခါမိန်းမသည်မိမိခင်ပွန်းကြောက်ရမည်.
6:3 ဒါကြောင့်သင်နှင့်အတူချမ်းသာစေခြင်းငှါဒါ, and so that you may havealong life upon the earth.
6:4 ပြီးတော့သင်, fathers, do not provoke your children to anger, but educate them with the discipline and correction of the Lord.
6:7 Serve with good will, ထာဝရဘုရားအားအဖြစ်, and not to men.
6:9 ပြီးတော့သင်, lords, act similarly toward them, setting aside threats, knowing that the Lord of both you and them is in heaven. For with him there is no favoritism toward anyone.
6:10 Concerning the rest, ကိုညီအစျ, be strengthened in the Lord, by the power of his virtue.
6:13 ဒီအတွက်ကြောင့်, take up the armor of God, so that you may be able to withstand the evil day and remain perfect in all things.
6:14 ထို့ကြောင့်, ရပ်တည်ချက်ကုမ္ပဏီ, having been girded about your waist with truth, and having been clothed with the breastplate of justice,
6:16 ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုခုနှစ်တွင်, take up the shield of faith, with which you may be able to extinguish all the fiery darts of the most wicked one.
6:21 အခုတော့, so that you also may know the things that concern me and what I am doing, Tychicus,amost beloved brother andafaithful minister in the Lord, will make known everything to you.
6:24 May grace be with all those who love our Lord Jesus Christ, unto incorruption. အာမင်.